काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले आगामी वर्षको बजेटमा ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । समितिले विभिन्न मन्त्रालय, आयोग, निजी क्षेत्र तथा विज्ञसँगको छलफलपछि निष्कर्ष र सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको...
काठमाडौं । अर्थविद डा. शंकर शर्माले कोरोना भाइरसको कारण रोजगारी गुमाउनु परेको मानिसको लागि मासिक ६ अर्ब राहतको आवश्यक भएको बताएका छन् । बुधबार नेपाल उद्योग परिसंघको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले कोारेना भाइरसले उत्पन्न...
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोना संक्रमणको कारण थला परेको नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न लगानीको समस्या नहुने बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले गरेको बेविनारमा सहभागी हुँदै डा. भट्टराईले भारत र...
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले लकडाउनको कारण समस्या परेका नेपालीको जीवनयापन गर्न सरकारले रकम दिनुपर्ने बताएका छन् । सरकारले जारी गरेको लकडाउनको कारण दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरुका लागि एक...
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले लकडाउनले सबैलाई समस्या परेकोले लकडाउनलाई समान्य अवस्थामा लाने पक्षमा सरकार रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघले जुममार्फत गरेको कार्यकममा बोल्दै मन्त्री भट्टले अब कोरोनासगँ...
काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले रोजगारी गुमाएका श्रमजीवी, वेरोजगार र विपन्न वर्गलाई महिनाको ५ हजारका दरले नगद राहत दिन प्रस्ताव गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभामा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति...
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संकलन हुने निक्षेप र प्रवाह हुने कर्जाको बृद्धिदर कम भएको छ । गत आर्थिक वर्ष (आव) को तुलनामा चालु आवको चैत मसान्तसम्म निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहको बृद्धिदर...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी छन् । राष्ट्रपतिबाट सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने संबैधानिक व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति...
रोग र भोकसँग लड्न केही उद्योग खोल्नैपर्छ : डा‍.खतिवडा
२०७७ वैशाख ३१ गते १७:५६ विकासन्युज
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले केही उद्योगमा खुकुलो गर्नु पर्ने बताएका छन् । उनले राेग भोकबाटै लड्न केही उद्याेग खाेल्नु पर्ने बताएका हुन् । प्रतिनिधिसभामा बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्तको विषयमा उठेको सवालको जवाफ दिँदै उनले...
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक सम्वृद्धिको नारा सफल पार्न पूर्ण बजेट नै ल्याउने बताएका छन् । बुधबार बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री खतिवडाले सरकारले लिएको आर्थिक सम्वृद्धिको नारा...
काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार २० लाख करोड भारतीय रुपैयाँको विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेका छन् । उनले मंगलबार ८ बजे देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै २० लाख करोड भारतीय रुपैयाँको विशेष आर्थिक प्याकेज...
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको खोजी भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सासंद सांसद् राजेन्द्र लिङ्देनले संसदमा अर्थमन्त्री उपस्थित नभएकोमा आपत्ति जनाउँदै उनको उपस्थिति नभएसम्म आफूले नबोल्ने अडान लिएपछि सभामुख...
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७७ वैशाख २८ गते संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना, समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणाली, वामपक्षीय घोषणापत्र...
करको दायरा बढाउने, बैंकको ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउने (पूर्णपाठसहित)
२०७७ वैशाख २८ गते १५:५९ विकासन्युज
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले करको दायरा विस्तार गरिने बताएका छन्। संसदमा आगामी बजेटको प्राथमिकतामा करकाे दायर विस्तार गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र निर्यातमूलक उद्योग स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गर्ने बताएका...
आगामी बजेटका प्राथमिकताः आधारभूत नि:शुल्क स्वास्थ्यसेवादेखि कर छुटसम्म
२०७७ वैशाख २८ गते १२:३० विकासन्युज
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्याक्रम र बजेटमा नागरिकलाई आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा संसदमा आइतबार खतिवडाले आगामी बजेटका सिद्धान्तहरु...
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेस निकट अर्थशास्त्रीहरुले कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न जोखिम न्यूनिकरण गर्न सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको आर्थिक प्याकेज ल्याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । सरकारले कूल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ५ प्रतिशत रकम...
मुलुक अहिले संकटमा छ । भविष्यमा आर्थिक र सामाजिक दृष्टिले अझ कठिन चुनौतीहरुको सामना गर्नु पर्नेछ । कोभिड–१९ को महामारीलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले दोस्रो विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा दर्दनाक मानवीय विपत्ति भनी...
काठमाडौं । आजदेखि संसदको वर्षे अधिवेशन (बजेट अधिवेशन) सुरु हुँदैछ । बैठक अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ । संयुक्त रुपमा बस्ने प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाको बैठकका लागि सामाजिक दुरी कायम गरी आसनको व्यवस्था गरिएको...
काठमाडौं । कोरोना भाइरस नियान्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले जारी गरेकाे लकडाउनका कारणा उत्पन्न असहज अवस्थाबाट पार पाउन निजी क्षेत्रले सहुलियतदरकाे व्याजदर कर्जा पाउनुपर्ने माग दाेहाेर्याएकाे छ । प्रतिनिधिसभा अन्तरगतकाे अर्थ समितिले गरेकाे छलफलमा...
कोरोना संकटले विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रमा हुने गरेको आपूर्तिमुखी (सप्लाई-साईड म्यानुफ्याक्चरिङ्ग) प्राथमिकता अब सेवा क्षेत्रतिर निर्देशित भएको देखिन्छ । अभावको त्रासले गर्दा बस्तुहरुको खरिदमा वृद्धि भएर पसल र गोदाम रित्तिएका छन् । विश्वव्यापी रु...